ဗိုလ်​တ​ထောင်​၊ ဗိုလ်​မြတ်​ထွန်းလမ်းမ​ပေါ်၊ 23'x47'၊ ပထမထပ်​၊ BR-1,A/C-3,​ကြွေပြားခင်း...
ဗိုဘ်​တ​ထောင်​မြို့နယ်​၊ ဗိုလ်​မြတ်​ထွန်းလမ်းမ​ပေါ်၊ တွင်​ရှိပါသည်​။ 23...
Ad Number S-8121110
တာမှမွေို့နယျ အလှာနိမျ့တိုကျခနျး ကယျြအရောငျး
# ပွငျဆငျပွီး အလှာနိမျ့ တိုကျခနျးကယျြ အရောငျး ...တာမှမွေို့နယျ, ...
Ad Number S-8120495
ရွှေမြင့်မိုရ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် Close
မွောကျဒဂုံမွို့နယျ ပွငျဆငျပွီး လုံးခငျြးအိမျ အရောငျး
အိမျရောငျးမညျ ၄၃ ရပျကှကျ , မွောကျဒဂုံ ♦️အိမျ အမှတျ ပေါငျးခွငျး Lucky...
Ad Number S-8120119
ဈေးတန် လုံးချင်းအိမ် ရောင်းမည်
💥 VIP -2 တိုက်သစ် (4800)သိန်း 💥 သုဝဏ္ဏ/ VIP -2 ပေါ်ဆန်းမေ...
Ad Number S-8119904
Eain Taw Yar Real Estate Close
အလှာမွငျ့ view ကောငျး 3MBR,5AC,ပွငျဆငျပွီး အသငျ့နရေနျ...
3,400 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8119815
လမ်းမတော်မြို့ နယ်.12လမ်း (12 .5x50).၆လွာ ပါကေးခင်း.အိပ်ခန်း1ခန်း.a/cပါ...
Ad Number S-8119804
အလုံမြို့နယ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။
13,500 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8119313
🌾သဃျကြှနျး၊ ပွညျသာယာလမျးအနီး မွသေီးသနျ့ ရောငျးမညျ။
🌾 သဃျကြှနျး၊ ပွညျသာယာလမျးအနီး 🌾 မွ...
Ad Number S-8119071
ဗဟန်း သံလွင်လမ်း ဈေးတန်မြေကွက်ကျယ်ရောင်းမည်
80,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8121750
Time မင်းရဲကျော်စွာကွန်ဒိုတွင် (2205sqft) အကျယ်ရှိအခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
4,650 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8121741
View Point Real Estate Service Co.,Ltd. Close
(1800sqft)အကယျြ၊ ဗဟနျး၊ ရတနာအငျးယားကှနျဒို၊ အဆငျ့မွငျ့ပွငျဆငျပွီး ကှနျဒိုရောငျးရနျရှိ
Ad Number S-8121722
MYAWADDY TOWER( 2000sqft) 3600သိနျး
Ad Number S-8121630
Ad Number S-8121577
ဟံသာဝတီအိမ်ရာတွင် (675sqft) အကျယ်ရှိတိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
Ad Number S-8121532
ပေအကျယ် (19x55) တိုက်ခန်းသစ်
Ad Number S-8121484
Ad Number S-8121472
ပြည်သူကွက်သစ်လမ်းတွင် (12×55) အကျယ်ရှိတိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
510 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8121443
ရတနာလမ်းတွင် (1250sqft) အကျယ်ရှိတိုက်ခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
1,570 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8121411